ဂျင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံအတွက် China Crystal AB Rhinestone Banding Rhinestone ချုံ့ခြင်း Erjiao
အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Alibaba သို့သွားသည်။ https: //maijiao.en.alibaba.com
24 တန်း RHINESTONE Mesh
24 RHINESTONE မရှိဘဲ RHINESTONE အတန်း
ပိုမိုကောင်းမွန်သော Transparent Ss12 Ss8 Banding အားဖြင့် ...
လက်ကားအရည်အသွေးမြင့်ပင့်လင်းပလတ်စတစ် Ss12 Ab T ...
လက်လီအရောင်းဆိုင်များဖြစ်သော SS8 Hot Sales Rhinestone ချုံ့ခြင်း၊ ပလပ်စတစ် ...
Crystal AB Rhinestone လှိုင်းခုံး Rhinestone ...
တရုတ် SS6 Rhinestone Banding ချုံ့ခြင်း, Crystal Rhi ...
Crystal AB Rhinestone Bin Rhinestone ဂျင်းဘောင်းဘီကိုချုံ့ခြင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ကျောက်ထည်ပစ္စည်း - Glass, Glass Rhinestone နှင့်ပလတ်စတစ်ပုံစံ - Round Rhinestones အမျိုးအစား - Loose Rhinestones နည်းပညာ - အပ်ချုပ်ပုံစံ - Flatback အသုံးပြုမှု - အိတ်များ၊ အဝတ်အထည်၊ ဖိနပ်၊ Diy အလှဆင်ခြင်း, ပါတီ၊ Cloythes, Hat, စသည်ဖြင့်။ မူရင်း - Zhejiang, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Maijiao မော်ဒယ်နံပါတ် - 0650 ကုန်ပစ္စည်းအမည် - ပလပ်စတစ် Rhinestone အသုံးပြုမှု - အဝတ်အထည်ဖိနပ်အိတ်များတီရှပ် MOQ: အရောင် ၁၀၀၀၀ ကိုက် - လက်မှတ်: ISO Packin ...
အိတ်များ၊ အဝတ်အထည်၊ ဖိနပ်၊ Diy အပြင်အဆင်၊ ပါတီ၊
ပလတ်စတစ် Rhinestone ချုံ့
အရောင်နှုန်း 1600 ကိုက်
တစ်ပတ်လျှင် 10000 ကိုက် / ကိုက်
10 ကိုက်ကဒ်ပြား။ 50 ကိုက်တစ်လိပ်။ 100 ကိုက်တစ်လိပ်။
အရေအတွက် (ကိုက်) 1 - 200000 > 200000
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ)7ညှိနှိုင်းခံရဖို့
ပစ္စည်း: ကျောက်ခေတ်: ကြည်လင်ဖန်တစ် ဦး က +
အရောင်: Crystal, အရောင်နှင့် AB crystal ။
အထုပ်: ၁၀ ကိုက်ကဒ်၊ ၅၀ ကိုက်လိပ်၊ ၁၀၀ ကိုက်လိပ်။
တင်ပို့: 3-15 အလုပ်လုပ်ရက်
PCs / ကိုက်
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: 10 ခြံကဒ်။ 50 ခြံလိပ်။ 100 ခြံလိပ်။
ဆိပ်ကမ်း: Yiwu Port နှင့် Ningbo Port
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့)
Rhinestone Strass ဖလားကွင်းဆက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ကြိုဆိုပါသည်။Yiwu Zhuyi လက်ဝတ်ရတနာဆက်စပ်စက်ရုံ
၁ ။ ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်း 20 အတွေ့အကြုံ။
၂ ။ အားလုံးထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးရေးဖြစ်ကြသည်။
၃ ။ အဆင့်မြင့်မှိုထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မှိုထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်များ။
၄ ။ နိမ့်ဆုံး MOQ နှင့်စက်ရုံစျေးနှုန်း။
၅ ။ ပြီးနောက် - ဝန်ဆောင်မှုမှပြီးပြည့်စုံသောနှုန်း - ဝန်ဆောင်မှု။
Q1: စျေးနှုန်းနှင့် MOQ ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
A: စက်ရုံ၏တိုက်ရိုက်စျေးနှုန်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည်အရောင်တစ်ခန်းလျှင် ၁၆၀၀ ကိုက်ဖြစ်သည်။
A: ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးသည်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းမပြုမီတင်ပို့မည်ဖြစ်ပြီး၊ စစ်ဆေးရန်အတွက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုလည်းရှိပါသည်။ Alibaba သည်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ပါလိမ့်မည်။
A: စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်အပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြား (ဥပမာဂျာမနီ၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်စသည်)၊ မြောက်အမေရိက (အမေရိကန်၊ ကနေဒါစသည်) အာရှ (ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ မလေးရှားစသည်တို့) နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့သည်။ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ဘရာဇီးစသဖြင့်။
Q6: ကျွန်ုပ်၏ ၀ ယ်ယူခြင်းအတွက်မည်သို့ငွေပေးချေရမည်နည်း။
A: Credit Card၊ Bank၊ Western Union နှင့် Paypal စသည်ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
A: ပို့ကုန်မတိုင်မီအပ်ငွေ ၃၀%၊ လက်ကျန်ငွေ ၇၀% ။
A: သေးငယ်သောအမှာစာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်ခန့်ကြာမြင့်သည်။
A: ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ၇ ရက်လောက်ကြာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ၇ ရက်ကနေ ၁၅ ရက်အထိကြာတယ်။
A: ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းကိုသူတို့နံပါတ်နဲ့အတူတင်ပို့မှာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာတင်ပို့မှုအခြေအနေကိုသင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
●ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်း 20 အတွေ့အကြုံ။
●နိမ့်ဆုံး MOQ နှင့်စက်ရုံစျေးနှုန်း။
●ပြီးနောက် - ဝန်ဆောင်မှုမှပြီးပြည့်စုံသောနှုန်း - ဝန်ဆောင်မှု။
ရှေ့သို့ ၀ တ်စုံအတွက်အ ၀ တ်အထည်များတပ်ဆင်ထားသောလက်ကိုင်ပလတ်စတစ် Rhinestone ပုတီးစေ့ချခြင်း
နောက်တစ်ခု: ဂွာတီမာလာတွင်စားဆင်ယင်အဘို့အပလတ်စတစ် Rhinestone ပုတီးစေ့အရောင် Rhinestones တပ်ဆင်
Hot Sale ဂွာတီမာလာ Rhinestone ကျောက်တိုင်၊
လက္ကား rhinestone ကွင်းဆက်ပေးသွင်း, rhinestone ...
လူကြိုက်များ Purpler ပလပ်စတစ် Rhinestone Banding Roll ...
စျေးပေါသည့် Crystal ပလတ်စတစ် Rhinestone Bandi ...
Rhinestone ကွင်းဆက်လက်ကားပလတ်စတစ်အလှပြုပြင်ခြင်း ...
စက်ရုံလက်ကားဖက်ရှင်စုံ Light Purple Pla ...
လိပ်စာ:ဌာနချုပ်： မရှိပါ။ ၁၆, ဝိုင်ဒယ်လ်၊ ကျေးလက်ချောင်းမြောင်း၊ Yisanli လမ်း၊
အခမဲ့ဖုန်း 0086 13958400086